Farmaajo “Cudurka Dabaysha waa laga cirib tiray dalka” – Balcad.com Teyteyleey
Farmaajo “Cudurka Dabaysha waa laga cirib tiray dalka”
Farmaajo oo ka hadlay munaasabad dowladdu ay kusoo bandhigaysay mira dhalka dadaalladii lagu dabar- gooynayey cudurka dabaysha ayaa waxa uu ku ammaanay shacabka Soomaaliyeed, Wasaaradda Caafimaadka iyo hay’adaha bah-wadaagta la ah sida ay ugu dhabeeyeen higsigoodii ku aaddanaa ciribtirka cudurkan dilaaga ah.
“Dowladda Federaalka Soomaaliya waxaa ka go’an in ay joogteyso dadaallada lagu ciribtirayo, loogana hortagayo cudurrada dilaaga ah oo ay dabeyshu kamid tahay sida ku cad Qorshaha Horumarinta Dalka.” ayuu yiri Madaxweynaha.
The post Farmaajo “Cudurka Dabaysha waa laga cirib tiray dalka” appeared first on Ilwareed Online.
Mooshin ka dhan ah Madaxweynaha Hirshabelle oo Jowhar ka socda